တနေ.တာတွေ့ကြုံမှုနံပါတ်(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » တနေ.တာတွေ့ကြုံမှုနံပါတ်(၂)
Posted by aungnng87 on Aug 15, 2011 in Local Guides, My Dear Diary |3comments
တ.နေ တာ နံ ပါတ်(၂) မှ
ဒီနေ့အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်တာမို. အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ဘာဟင်းချက်စားရရင်ကောင်းမလဲတွေးပြီး ရေခဲသေတ္တာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ရေခဲသေတ္တာကြီးက empty ဖြစ်နေတာမို့ ဈေးသွားရမယ်ဆိုပြီး အိမ်နီးချင်း
အင်ဒိုမတယောက်က်ို ဖုန်းဆက်ပြီး ဈေးသွားဖို့ အဖော်ညှိလိုက်တော့ သူကလည်း OK lah, pegi pasar lah ဆိုပြီး ၂ယောက်သားအိမ်ကအထွက်မှာ တခြားအင်ဒိုမတယောက်ကလည်း သူလဲ လိုက်မယ်ဆို ပြီး ၃ ယောက်
သား pudu ဈေးကိုသွားကြတာပေါ့.pudu ဈေးဆိုတာကွာလာလမ်ပူမှာ နံမယ်ကြီးဈေးတခုဘဲ။ ကိုယ်အိမ်နဲ့ဆိုရင်သိပ်မဝေးတော့ မကြာခဏ သွားဖြစ်တယ်။ တနဂ`်နွေနေ့ဆိုရင် တရုတ်၊ ကုလား၊ မလေးနဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပျံကျအလုပ်သမားတွေပေါင်းစုံနဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာတခုပေါ့။ ဈေးလည်းတော်တော်ပေါတယ်။ တခါတခါဆို ဟင်းရွက်တွေ၁ရင်းဂစ်ဘိုးဆိုရင် တပွေ့တပိုက်ကြီး၊ ပစ္စည်းကပေါ လူကမသယ်နိုင် ကိုယ့်လောဘနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့နေရာပေါ့။
သွားတဲ့၃ယောက်ထဲကအင်ဒိုမတယောက်ဟာ ဒီကမလေးလူမျိုး(ရဲ) နဲ့ လက်ထပ်ထားတာ နံပါတ်၂မိန်းမပေါ့။
လက်ပါဘို့ဝန်မလေးဘူး။သူ့လုပ်စာလည်းမစားရဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုရှာစားရတာတောင်မှ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မလုပ်ရဘူး။ ယောက်ျားလုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ဘဲ လစာနဲနဲများများလုပ်ရတယ်။ သူ့ယောက်ျားနဲ့ပါတ်သတ်ရင်တော့သူကသနားစရာ။ ဒါပေမဲ့သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာတော့စကားပြောရင်အထက်စီးဘဲ။ သူသိသူတတ်ဘဲ။
သူ.အိတ်အခွဲခံရလို.ပိုက်ဆံအိတ်ပါသွားပြီဆိုပြီးပြတယ်။ တကယ်လည်းအိတ်ကဒါးခွဲရာကြီးနဲ့။ဈေးထဲမှာလူတွေကလည်းကျပ်သပ်နေ။ပထမတော့လူတွေကအုံအုံ အုံအုံနဲ့
ပြောကြတယ်။ ဆိုင်ရှင်တွေကတော့သွားသွားလမ်းပိတ်တယ်ဆိုပြီးမောင်းထုတ်တယ်။ သူ့ခမျာလည်းလည်းတုန်တုန်ခိုက်ခိုက်နဲ့ငိုဟယ်ရီဟယ်နဲ့။ ကိုယ်ကနင်ဘာလုပ်မလဲမေးလိုက်တော့ အဲဒီလူကိုသွားပြန်ရှာမယ်တဲ့။ နင်သွားပြန်ရှာတော့ရောအဲဒီလူကိုနင်ကသိလို.လား။ နင့်ကိုဘယ်အချိန်ကခွဲမှန်းတောင်နင်သိလို.လားလို.ကိုယ်ကမေးတော့သူက သူငယ်ချင်းဆီကနေပိုက်ဆံတောင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းကလည်းသူ.ဆီမှာမပါဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုပေးခိုင်းလို. ကိုယ်လည်း၁၀RMထတ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြန်တော့ပေါ့။ သူကမဟုတ်သေးဘူး ရဲစခန်းလိုက်ခဲ့ပေးပါတဲ့။ ကိုယ်ကမလိုက်နိုင်ဘူး။ နင်.ယောက်ျားနင်ဖုန်းဆက်လိုက်။သူဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့။ ဆိုတော့ သူ.ယောက်ျားသိရင်အရိုက်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တွေကိုဘဲကူညီပါကူညီပါလုပ်နေတယ်။ ခက်တော့ခက်သားလူတွေက… ပြောရရင်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားဆိုတာဘယ်ရဲနဲ့မှမပါတ်သတ်ချင်ကြဘူး။ ကိုယ်တွေဆိုမလေးစကားလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မရ ဘယ်လိုဦးဆောင်ပြီး ရှင်းပြနိုင်ပါမလဲ။ ကိုယ်ကလည်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်စားမယ်ဆိုပြီးဈေးလာတာ။ အခုတော့ဈေးမ၀ယ်ရဘဲရဲစခန်းေ၇ာက်ရမဲ့ကိန်း။ ကိုယ်.်ယောက်ျားသိရင်လည်းအပွက်ခံရမှာ။ သူကလည်းကိုယ်ကိုဈေးမသွားနဲ့သူသွားမယ်လို.ပြောထားတာ။ ကိုယ်ကိုကအပြင်ထွက်ချင်လို.ဆိုတော့…။ တိုင်တွေပတ်နေကြတာပေါ့။ ဒါနဲ့ငါဈေးဆက်ဝယ်နေရင်တော့ ဒီမိန်းမငါ့ကိုဦးနှောက်စားဦးမယ်။ြ ပန်တော့မယ်ဆိုပြီးသူငယ်ချင်း အင်ဒိုမကိုပြောပြီးပြန်ချလာခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီမိန်းမရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာပါသွားတာကRM၂၀၀ ရယ်၊ passportရယ်၊ သူနဲ့သူ့ယောက်ျားလက်ထပ်စာချုပ်ရယ်တဲ့။ ဘာကြောင်ဒီဈေးကိုလာတာအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေယူလာရတာလဲဆိုတော့ သူ.ယောက်ျားကဘယ်သွားသွားအဲဒါတွေသယ်သွားရမယ်ဆိုလို.တဲ့။ ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်ပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။
တကယ်တေ့ာ ခါးပိုက်နှိုက်ကပိုက်ဆံအိတ်ဆိုပြီးနှိုက်လိုက်တာ။ သူ.အတွက်ကံကောင်းတာက ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာငွေ၂၀၀ပါတယ်။ အဲဒီငွေ၂၀၀ကအင်ဒိုမအတွက်တလစာဘဲ။
ကျန်တဲ့passport တွေ၊ လက်ထပ်စာချုပ်တွေကခါးပိုက်နှိုက်အတွက်အပိုတွေ။ လိုချင်မှာတောင်မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့အနှိုက်ခံရသူအတွက်ကျတော့ဘ၀ပါဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလက်ထပ်စာချုပ်သာမရှိရင် သူ.ဘ၀ကဒီလူဟာသူ့ယောက်ျားပါဆိုတာလက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်တော့ပါဘူး။ ဆိုတော့သူဟာသနားဘို.တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ခါးပိုက်နှိုက်တွေဟာသူခိုးထက်တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူခိုးကမှသူလိုချင်တာရွေးခိုးသေးတယ်။ ပါလာလို့ပြန်ပေးချင်ရင်လည်း အိမ်သိတော့ပြန်ထားပေးလို့ရသေးတယ်။ခါးပိုက်နှိုက်ဆိုတာတွေက လမ်းပေါ်မှာနှိုက်တာဆိုတော့ မလိုချင်ရင်လမ်းပေါ်ဘဲ လွှင့်ပစ်လိုက်မှာပါ။ ခါးပိုက်နှိုက်တွေကြောင့် လူတွေရဲ့ဘ၀ပျက်လုမတတ်ဖြစ်ရတာတွေ နှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်ရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို.တွေကိုယ်တိုင်စောကြောမိရဲ့လားလို.မေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ချင်းစာမှတော့ အစကတည်းက ဘယ်လိုလုပ်ခါးပိုက်နှိုက်တော့မလဲ အစ်မရယ်…
ခါးပိုက်နှိုက်လို့ ပြောပါနဲဗျာ၊ လက်ကိုင်အိတ်ခွဲသူပါ။
ကိုယ်တိုင်တော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက ရွာထဲသိပ်မရောက်ဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်။
ဖတ်လို့လည်းကောင်း၊ ဗဟုသုတလည်းရစေတဲ့ ပိုစ့်ကောင်းလေးပဲ။
စာရေးကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့စာတွေ ထပ်မဖတ်ရတော့တာ နာတာပဲ။